सरकार र नेतृत्वप्रति यति धेरै वितृष्णा किन ? - onlinekarnali.com
। २० आश्विन २०७७, मंगलवार १७:०५ मा प्रकाशित
नेपाली समाजमा दुःख, बिमार र समस्या पर्दा शत्रुलाई समेत सान्त्वना दिने गरिन्छ । तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता र उनीहरुका सहयोगीहरु बिरामी भएको थाहा पाएपछि छिटै निको होओस् भनेर कामना गर्नेहरु भन्दा खुच्चिङ भन्नेहरु धेरै हुन्छन् । नेताहरुप्रति यतिसम्मको वितृष्णा किन त रु उत्तर सजिलो छ – मत माग्ने बेलामा जस्तो काम गर्ने बेलामा उनीहरुले नागरिकको मन जित्न सकेनन् । आशा र आश्वासन मात्रै देखाए, आफ्नो प्रवृत्ति सुधार गर्न सकेनन् ।
न प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली सन्तषोजनक छ, न उहाँका सल्लाहकारका सल्लाह चित्तबुझ्दो । न मन्त्रीहरुले भनेजस्तो गर्न सके, न सरकार चलाउने र विपक्षीमा रहेका नेताहरु हुनुपर्ने जस्ता भए । प्रधानमन्त्रीका कतिपय सल्लाहकार र नेताहरुका नसुहाउँदा अभिव्यक्ति र प्रतिक्रियाले पनि नागरिकको मनमा वितृष्णा बढाउन मलजल गरेको छ ।
कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र र नागरिकको दैनिकीलाई लयमा फर्काउन अरु धेरै काम गर्नै पर्दैन, बजेटमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरे मात्रै पुग्छ । विकास, निर्माण र जनजीविकाका ठूला आशा र आश्वासन देखाउनै पर्दैन, मात्र नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढाउने निर्णय नगर्दा मात्रै पुग्छ । आफ्नो कारणले नागरिकमा निराशा बढेको सत्य बुझेका प्रधानमन्त्री, उहाँका सहयोगी र अरु नेताहरुले आफ्नो कार्यशैली सुधार्न सक्लान् त ? उज्यालो